အယ်ကိုင်ဒါတဲ့… ရာရာစစ လူပါးဝလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အယ်ကိုင်ဒါတဲ့… ရာရာစစ လူပါးဝလို့
အယ်ကိုင်ဒါတဲ့… ရာရာစစ လူပါးဝလို့
Posted by Phaung Phaung on Jun 9, 2012 in Creative Writing, Critic | 8 comments
မ ခံ ချင် လွန်း လို့ ပါ
အယ်ကိုင်ဒါမှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက်ဆိုပြီး ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရလို့ ဒေါသအလိပ်လိုက်ထွက်ပြီး ဒီပို့စ်ရေးဖို့ဖြစ်လာရတာပါ။
အလ်ကာအိးဟ်(အလ်ကိုင်ဒါ)မှ မြန်မာပြည်သို့ အသိပေးကြေငြာချက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ်ကိုင်ဒဟ်အဖွဲ့အစည်းအား နေရာဒေသတစ်ခု(သို့) လူမျိုးစုတစ်ခုအတွက် ဖွဲ့စည်းထားခြင်အလျဉ်းမဟုတ်။ သို့သာမက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မြတ်နဗီ(ဆွ)၏အမိန့်တော်အား သက်သေပြရန်အတွက်၊ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ အမိန့်တော်အား လိုက်နာနေသူများအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့
သောဆယ်စုနှစ်များမှစရ်ျ မြန်မာပြည်၏မွတ်စလင်များ အခြေအနေအရပ်ရပ်အား လေ့လာနေကြပြီး၊ စီမံကိန်းကြီးများပြုလုပ်လျှက်ရှိခဲ့သည်။ (အကြမ်းဖက်သိမ်းပိုက်ဖို့စီမံကိန်းလား ? ? အမေရိကန် မျိုးဖြုတ်လို့မကုန်သေးရင် မြန်မာတွေဆက်ပြီး ဒင်းတို့ကိုမျိုးဖြုတ်ပေးမယ်) ယခုမြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်ုပ်တို့အား တိုင်ကြားစာ၊အကူအညီတောင်းခံစာများစွာ ရောက်ရှိလာသကဲ့သို့ အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့
သို့ဖြစ်ပေရာ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်ဦးစွာပထမ အသိပေးသဘောဖြင့် က်ျကျေငြာချက်အား မြန်မာပြည်သူများနှင့်အစိုးရထံသို့ပေးပို့လိုက်ပါသည်။လွန်ခဲ့သည့်အပတ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သဗ်လီဂီမွတ်စလင်(10)ဦးအား ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သတ်ရ်ျ ကျွန်ုပ်တို့သည် မွတ်စလင်များနှင့်ထပ်တူကြေကွဲခံစားရပါသည်။ မြန်မာပြည်ရှိမွတ်စလင်လူငယ်များ၊အမျိုးသားအမျိုးသမီးများအားလုံးအနေနှင့်၎င်း(10)ဦးအား ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာသာသနာ့အာဇာနည်များအဖြစ် နှလုံးသွင်းကြရန်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အထူးတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ ( အော့နှလုံးနာလိုက်တာ ) မြန်မာနိုင်ငံရှိမွတ်စလင်တို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကောင်းမှု့ပွားရန်၊စိုးရိမ်မှုအပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး အဖက်ဖက်မှဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာနေထိုင်ရန်
အတွက် ဂျေဟားဒ်အဖွဲ့အစည်းများထူထောင်ရန်လည်းလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့မွတ်စလင်များသည် အချိန်မရွေးလည်လှီးခံရနိုင်သော အိမ်မွေးကြက်များမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းပြကြယ်များသည် ကာဖရ်များထံမှ အကောက်ခွန်ယူရ်ျ သြဇာပြနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသော အချက်မှာ- ကျွန်ုပ်တို့သည်အနှိပ်စက်ခံနေရပါလျှက် လက်တုန့်ပြန်မှု့မပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဒါဆိုရင် ဒင်းတို့နိုင်ငံမှာခေါ်ထားပါလား၊ သူများနိုင်ငံလည်းလာနေသေးတယ် တော်တော်ကို လူပါးဝနေတယ်။ )
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြကုန်သော မွတ်စလင်များအား အသိပေးလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာပြည်ရှိ နောင်တော်များနှင့်ပတ်သတ်ရ်ျ မျက်စိပိတ်၊နားပိတ်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်း၊အခြေအနေကောင်းမွန်လာသည်နှင့် လိုအပ်သည့်အကူအညီများအား ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အချို့အချက်အလက်များအား အစိုးရထံတောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရ်ျ ကျွန်ုပ်တို့နောင်တော်များအား ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါက လူလွှတ်ရ်ျလက်စားချေသွားမည်ဖြစ်သည်။ ( သတ္တိရှိရင် လာခဲ့လိုက်စမ်းပါ)
–	လွန်ခဲ့သော အပတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ရ်ျ အစိုးရအနေနှင့် သတ်ဖြစ်သူများအား ပြန်လည်အသက်သေစေခြင်းရှိရမည်။ ( ဒင်းတို့ရဲ့ခွေးသားဝက်မြေး 3ကောင်ကိုကျတော့ ထည့်မပြောဘူး။ အမျိုးသေမှလာနာနေတယ်)
–	ထိုကိစ္စနှင့်အလားတူကိစ္စများထပ်မံမဖြစ်လာစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ (သူများနိုင်ငံကအစိုးရကိုလာပြီးအမိန့်ပေးနေတယ်..)
–	ဘာသာတရားအားလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုပြီး ဘလီ၊ကျောင်းနှင့်သာသနာပိုင်
အဆောက်အဦးတို့အားကာကွယ်ပေးရမည်။ ( ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီး လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်ချင်နေတာ အသိသာကြီး အစွန်းရောက်တွေရဲ့ )
–	ပြည်တွင်းပြည်ပရှိမွတ်စလင်များအား ဖိနှိပ်ခြင်းလုံးဝစွန့်လွှတ်ပေးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာမွတ်စလင်တို့အားလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်ပေးရမည်။ ( ဒင်းတို့ကို တိုင်းပြည်ထဲမှာထားရတာ မြွေပွေးခါးပိုက်နှိုက်ထားနေရတယ် )
–	မွတ်စလင်တို့အားစော်ကားသည့်ဆောင်းပါး၊ရုပ်သံ၊ပျက်လုံးစသည့်အရာတို့အား ထိရောက်စွာအရေးယူပေးရမည်။ ( ဒင်းတို့က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသရေမဲ့လွန်းလို့ ဒီလိုနှိမ်ကြတာမဆန်းပါ)
က်ျအချက်ငါးချက်နှင့် အစိုးရထံမှတောင်းဆိုသည့်ကိစ္စတို့ကို တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် အဆုံးမသတ်သောစစ်ပွဲတစ်ခုအား ရင်ဆိုင်ရပေမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဆင်ခြေကိုမျှ လက်ခံမည်လည်းမဟုတ်ပေ။( ချိမ်းခြောက်ထားသေးတယ်။ လူပါးဝလို့။ မြန်မာတွေသွေး ဘယ်လောက်နီသလဲ စမ်းကြည့်လိုက်လေ။ )
မွတ်စလင်လူမျိုး(ကုလား)ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ၊ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ရေကိုပဲသောက်သောက်
ဒင်းတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာ ကျေးဇူးတင်စိတ်၊ နိုင်ငံသားလို့ခံယူတဲ့စိတ် နဲနဲလေးမှမရှိတာသေချာပါတယ်။ ဒင်းတို့ရဲ့ သားရေပေါ်အိတ်၊သားရေနားစားတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို
တကမ္ဘာလုံးကသိပြီးသားပါ။ ရာရာစစ မြန်မာပြည်သို့ကြေငြာချက်ဆိုပြီး ထွက်လာသေးတယ်။
ဒင်းတို့ကြေငြာချက်ကို ကြောက်သွားမယ်လို့များထင်နေသလား ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေရဲ့။ ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတောင်ဘာမှန်းမသိတဲ့ဟာတွေ။
အာဖဂန်နစ်စတန်လို ဒင်းတို့ချည်းပဲရှိတဲ့ နေရာမှာတော့ ဒင်းတို့တိုက်ခိုက်စရာ အမေရိကန်
နဲ့နေတိုးပဲရှိတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ ကြားလူပေါ့ ။ အေး…….. မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရင်တော့ တစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်နေမယ်မထင်နဲ့။ကုလားဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုပုံမျိုးလဲလို့ မေးရတဲ့အထိ မျိုးပြုတ်သွားမယ်မှတ်။
Scan ဖတ်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုတင်တာ မတင်တတ်လို့ ပုံဘယ်လိုတင်လည်းဆိုတာ ပြောပြကြပါဦး
ကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်၍ တင်ပါကြောင်း ။သူကြီး. ဦးခိုင်အိပ်ပျော်နေပြန်ပီဗျို့ ။
သူကြီးပြောတော့ ပို့ စ်(၂၅)ခုဆို။ခု ခြိမ်းခြောက်စာက ရခိုင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်
@ပေါင်ပေါင်ရေ စိတ်ကိုလျော့ပါကွယ်။မေတ္တာပေး၍မေတ္တာသာ ယူပါတော့။
ဟိုဟာ နဲ့ ဟိုဒင်း ကိုလေ နောင်လာနောက်သားများအတွက် အရုပ်ရေးပြရတော့မယ်
ဆိုတာ တကယ်ဘဲ ဖြစ်လာတော့မှာလား ဟင် .??????
သားသားတော့ ကြောက်ပါတယ် ။
သေသေချာချာ letter head နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အတုကြီးပါ၊ အမလေး-ကြောက်စရာကြီး၊ ဗြီးဟီးဟီး။
သိပ်မခြောက်ကြပါနဲ့… ကျုပ်ဖြင့် ကြောက်လွန်းလို့ ဘယ်ပြေးရမလဲ စဉ်းစားနေရပြီ …
အပေါ်က အူးလေး ပြောသလို အတုဂျီး ဖစ်ပါစေဂျာ ….။
ပေါင်ပေါင်ရေ…မနေ့ကညကပဲ အဲဒီအကြောင်းကိုဂေဇက်မှာဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ယုတ်တိမရှိပါဘူး။
တူလေး၊ ဂျစ်ပစီရေ၊ မင်းကြောက်ရင် ဗလီထဲ ဝင်ပုန်းနေပေါ့ကွယ်၊ လိမ်ဆင်ကြီး ပါ၊